Booqashada Tillerson ee Turkiga - BBC Somali
Image caption Tillerson wuxuu la kulmayaa Erdogan iyo saraakiil Turki ah
Waa kulankii ugu heerka sarreeyey ee dhex mara saraakiil Turki iyo Maraykan ah tan iyo intii uu xukunka la wareegay Madaxweyne Trump.
Ayadoo ay haddaba u muuqatay in ay shaki wayn aan laga qabin maamulka cusub ee Trump, ayaa haddana waxa jira is afgaranwaa ku saabsan cidda ay tahay in ay hoggaamiso dib u qabsashada magaalada Raqqa ee Suuriya ee gacanta ugu jirta kooxda isugu yeertay dowladda islaamiga.
Turkigu waxa uu doonayaa in Maraykanka uu meesha ka saaro gacan saarka uu la leeyahay dagaalyahanada Kurdiyiinta, Washington-na waxay ku doodaysaa in dagaalyahannada Kurdiyiinta ay yihiin xooggaga ugu firfircoon ee haatan ku sugan Suuriya.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee maraykanka, Rex Tillerson, waxa uu saraakiisha Turkiga kala hadli doonaa arrimahaasi, inkastoo aanay u muuqan in Maraykanku uu wax ka beddeli doono mowqifkiisa.
Sidoo kale waxa la filayaa in Turkiga uu cadaadis ku saaro Maraykanka in uu gacanta u soo geliyo wadaadka Fethullah Gulen, oo haatan ku nool gobolka Pennsylvania.
Xukuumadda Turkiga ayaa Fethulah Gulen ku eedeynaysa in uu ka dambeeyey afgambigii dhicisoobay, inkastoo sirdoonka reer Yurub ay arrintaasi shaki gelinayaan.
Maraykanka waxa uu ku adkaysanayaa in go'aanka ah wadaadkan gacanta loo geliyo Turkiga uu yahay go'aan u yaala maxkamadaha oo aanu ahayn go'aan siyaasadeed. Xiriirka Maraykanka iyo Turkiga ayaan wanaagsanayn 8-dii bilood ee la soo dhaafay, xoghayaha arrimaha dibaddana waxa uu wajahayaa xaalad cakiran.